Ungazibuyisa kanjani izithombe ezisusiwe ku-iPhone yakho | Ngivela kwa-mac
Ngenxa ye-iPhone yethu, nsuku zonke sithatha izithombe eziningi nezithombe-skrini, eziningi kakhulu, ukuthi uma senza ukubuyekeza kabusha sicishe esinye isixuku, futhi lapho senza lokhu, kungenzeka ukuthi ngephutha, sisusa ezinye izithombe asifuni ngempela ukususa. Ngenhlanhla, lapho sisusa izithombe, azisuswa ngqo, kepha zigcinwa kufolda ebizwa ngokuthi "Ukususwa Kwakamuva" izinsuku ezingamashumi amathathu, ngakho-ke uma ngaphambi kokuphela kwaleso sikhathi ubona ukuthi ususe isithombe ngaphandle kokufuna, ungasithola emuva. Namuhla sikutshela ukuthi ukwenze kanjani.
Phinda ususe izithombe namavidiyo
Njengoba ungacabanga, ukuthola kabusha izithombe ezisusiwe ku-iPhone yakho noma i-iPad, isinyathelo sokuqala kuzoba ukuvula uhlelo lokusebenza Izithombe bese uya esigabeni sama-albhamu ozosithola ngezansi kwesokudla. Okulandelayo, thola i-albhamu "Okususwe Kamuva" bese uqhafaza kuyo. Ngakho-ke, uzokwazi ukufinyelela kuzo zonke izithombe namavidiyo owasusile ezinsukwini ezingamashumi amathathu ezedlule. Cindezela "Khetha" ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Manje khetha izithombe ofuna ukuzibuyisa. Uma kuyizithombe eziningana ezilandelanayo kanye / noma amavidiyo, ungagcina umunwe wakho kowokuqala bese uhudulela kowokugcina ukuze uzikhethe ngokushesha okukhulu.
Bese ucindezela "Buyisa" ekhoneni elingezansi kwesokudla bese uqinisekisa kwimenyu ezovela esikrinini.
Uma ufuna, ungaphinda uthole zonke izithombe. Ukwenza lokhu, ungakhethi noma yini futhi uzobona ukuthi ekhoneni elingezansi kwesokudla ithi "Buyisa konke": cindezela bese uqinisekisa.
Izithombe zizobuyela esondweni njengoba kungenzekanga lutho 😀.
Ungakhohlwa lokho esigabeni sethu Izifundiswa unawo wonke amathiphu namasu ahlukahlukene wawo wonke amadivayisi wakho we-Apple, imishini namasevisi.
Ngale ndlela, awusilalelanga yini isiqephu se-Apple Talkings, i-Applelised podcast okwamanje?
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungazilulama kanjani izithombe ezisusiwe ku-iPhone yakho
USoy de Mac ugxile kwiWWDC ngaloMsombuluko, ngoJuni 13